umbuzo IL-76 entsha
iinyanga 1 kunyaka 6 eyadlulayo #729 by AJT67
Ndandicinga ukuba ngaba kukho umntu oye wayenayo nayiphi na imiba nge-IL-76 entsha?
Okokuqala, unombulelo oluninzi, ukuguqulelwa okumangalisayo kwenqwelo-moya enkulu endiyilinde iminyaka emininzi, nangona ndinemiba e mibini, enye encinci, kwaye enye ingavamile ukuyithetha encinci.
1. Ndizama ukufumana inkqubo yolawulo ye-SHIFT + 4. Ingaba kukho umntu oye waqwalasela iSaitek X-52?
2. Xa ndiphela ukuhamba kwendiza, linciphisa i-FSX ngakwesokunene sekhoneni eliphantsi kwesikrini sam. Andibonakali ukuhambisa loo Window ngokuzungezile, kwaye kufuneka uqede umsebenzi we-FSX ukuvala i-sim.
I-Sim isisesikweni, kwaye ayikho into engafanelekanga, ngoko ndiqinisekile ukuba oku kungabangela abanye.
Ukuba umntu unayo nayiphi na ingcamango malunga nendlela yokulungisa le nto, ngaba uncede undilahle impendulo.